Rasmi: filimka Padman iyo sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso ganacsiga uu sameeyay – Filimside.net
Taariikhda: February 12, 2018
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa ganacsi wacan sameeya sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso inkastoo Jimcadii uu ganacsi dhex dhexaad ah sameeyay hadana sabtigii 35% ayuu sameeyay halka axadii uu sameeyay 20% sare u kac ah ganacsigiisa.
Padman wuxuu keenay 39.50 Crore (Trade Figure) sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso sida shabakada Boxoffice India soo daabacday.
Padman waxaa wanaagsaneyn in axadii oo maalin nasiino ahayd sare u kac xoogan inuu sameeyo balse midaas waxay ku dhici weesay in fariinta filimkaan aysan ahayn mid bulshada dhan soo wada dhaweesay dumarka, taageerayaasha iyo kuwo ilbax ah ayaa filimkan u daawasho tageen halka bulshada qeybaheeda kale usoo daawasho tagin mashruucaan.
Padman hada waxaa laga rabaa inuusan hoos u dhac xoogan sameynin maanta oo Isniin ah waayo Talaado iyo Arbaco fasaxyo ayaa Hindiya ka jiraan oo ganacsiga filimkaan sare u qaadi karaan.
Pamdan wuxuu ku guuleestay sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay inuu filimka Toilet Ek Prem Katha kaga ganacsi wanaagsanaado Mumbai, Pune iyo Bangalore halka inta kale ee Hindiya TEPK ku fiicnaa.
Fadlan hoos kaga bogo mudo sedex maalmood Padman ganacsiga uu sameeyay sida shabakada BOI soo daabacday:
Axad – 16 Crore (Qiyaas)
Wadarta Guud – 39.50 Crore (Trade Figure) (Qiyaas)
Qaabka uu Padman ku socdo ganacsigiisa wuxuu la mid yahay filimkii Airlift ee isla Akshay Kumar 2016 sameeyay balse farqi yar ayaa u dhaxeeyo.
Airlift maalintiisa kowaad wuxuu keenay 11.12 Crore asigoo sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso keenay 42.50 Crore halka Padman maalintiisa kowaad uu keenay 10 Crore sidoo kalena sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso uu keenay 39.50 Crore laakiin Toilet Ek Prem Katha labadaan filimba wuu ka ganacsi wanaagsanaa madaama fariintiisa ay ahayd mid Hindiya oo dhan ku baahsaneyd.
Airlift wuxuu Padman kaga ganacsi badiyay sedexda maalmood ee hore in Airlift Delhi iyo East Punjab uu ganacsi adag ka sameeyay halka Padman uu Waqooyiga oo xoogaa ku yara liito ama heerkii laga rabay taagneyn.
Waxaa Aqrisay 875